अध्याय ५६ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
मैले दुष्कर्म गर्नेहरू र शक्ति प्रयोग गरेर परमेश्‍वरका छोराहरूलाई सताउनेहरूलाई दण्ड दिने काम सुरु गरेको छु। अब उप्रान्त, मेरा प्रशासनिक आदेशहरूको हात सधैँ तिनीहरूमाथि हुनेछ जसका हृदयहरू मेरो विरोधमा छन्। यो कुरा जान्। यो मेरो न्यायको सुरुआत हो, र कसैलाई पनि दया देखाइनेछैन, न त कसैलाई नै सजायबाट बचाइनेछ, किनकि म भावनामा नडुब्ने निष्पक्ष परमेश्‍वर हुँ जसले धार्मिकताको अभ्यास गर्छ, र तिमीहरू सबैले यो कुरा बुझेको राम्रो हुनेछ।
तिमीहरूले हरेक हिसाबमा मेरा हातका सबै काम र मेरो हृदयका सबै विचारहरूलाई देख्‍न सक्‍नुपर्छ। के यो सबै तिमीहरूकै लागि होइन र? तिमीहरूमध्ये को मेरो निम्ति छ? के तिमीहरूले आफ्‍नो हृदयका विचारहरू वा आफ्‍ना ओठका शब्दहरूलाई जाँचेका छौ? के तिमीहरूले यी कुराहरूको बारेमा विवेकशील शैली अपनाएका छौ? बेवकुफहरू! अपभ्रष्टहरू! तिमीहरू पवित्र आत्‍माको बन्धनहरूलाई स्वीकार गर्दैनौ! मैले तँभित्र बारम्‍बार मेरो आवाज निकालिरहेको छु, तैपनि यसले बिल्कुलै कुनै प्रतिक्रिया पैदा गरेको छैन। उप्रान्त सुस्त नबन्! तेरो कर्तव्य भनेको मेरो इच्‍छालाई बुझ्‍नु हो; यसको साथै, यो तँ प्रवेश गर्नुपर्ने मार्ग हो। तँ अलमल्ल परेको छस्, तँसँग कुनै अन्तर्ज्ञान छैन, र तँमा मैले के पूरा गर्न चाहन्छु वा तँबाट के प्राप्त गर्न चाहन्छु सो कुरा तैँले स्पष्टसाथ देख्दैनस्! मेरो इच्‍छालाई बुझ्‍नको लागि, तैँले मेरो नजिक आएर अनि मसँग अझै बढी कुराकानी गरेर सुरु गर्नुपर्छ। तँ सधैँ तैँले मेरो इच्‍छालाई बुझ्‍न सक्दैनस् भनेर भन्छस्। यदि तँ पहिले नै आफ्‍नो कुराहरूले भरिएको छस् भने, मैले कसरी तँमा काम गर्न सक्छु? तँ अग्रसरता जनाएर मकहाँ आउँदैनस्, तर निष्क्रिय रूपमा पर्खिन्छस् मात्र। म त भन्छु तँ गँड्यौला जस्तै होस्, तैपनि तँलाई अन्याय गरियो भन्‍ने लाग्छ र यस कुरालाई स्वीकार गर्न मान्दैनस्। यस पटक तैँले खडा भएर मसँग सहकार्य गर्नुपर्छ! निष्क्रिय नबन्! त्यसले तेरो जीवनलाई पछि पार्नेछ। सक्रिय बनिस् भने यसले तँलाई फाइदा गर्नेछ, अरूलाई होइन। के तैँले अझै पनि यस कुरालाई पहिचान गरेको र बुझेको छैनस्? मेरो इच्‍छा निरन्तर तँमा प्रकट हुन्छ। के तैँले यसलाई अवगत गरेको छैनस्? तैँले किन यसमा कहिल्यै ध्यान दिएको छैनस्? किन तैँले कहिल्यै पनि मेरो इच्‍छालाई बुझ्‍न सकेको छैनस्? के मेरो इच्‍छा बुझेर यसले साँच्‍चै तँलाई कुनै फाइदा गर्न सक्दैन?
तैँले सर्वथा मेरो इच्‍छाप्रति चासो देखा भन्‍ने म चाहन्छु ताकि तँद्वारा मसँग अघि बढ्ने बाटो र विश्राम गर्ने घर हुनेछ। मलाई उप्रान्त बाधा नदे—त्यो त अत्यन्तै निर्दयी कार्य हो! तँसँग मेरा वचनहरूको कुनै बुझाइ छैन, र तैँले तीप्रति कुनै प्रतिक्रिया दिँदैनस्। अहिले कुन समय हो हेर; योभन्दा बढी प्रतीक्षा हुन सक्दैन! यदि तैँले मेरा पाइलाहरूलाई नजिकबाट पछ्याउँदैनस् भने, ढीला भइसकेको हुनेछ, यसलाई तैँले छुटकारा गर्न सक्‍नेछस् भन्‍ने कुरा त परै जाओस्!
अघिल्लो: अध्याय ५५
अर्को: अध्याय ५७